Xagee mareysaa xiisadii siyaasadeed ee dalka Sweden! - NorSom News
Xagee mareysaa xiisadii siyaasadeed ee dalka Sweden!
Reysulwasaaraha Sweden: Stefan Lofven
Dalka Sweden ayaa maalmihii ugu danbeeyay ka taagneyd xiisad siyaasadeed oo gaartay meel sare, iyada oo ay qarka saarneyd inay dhacdo xukuumada uu hogaamiyo reysulwasaaraha Sweden, Stefan Lofven.
Xisbiyada mucaaradka ayaa shaley sheegay inay kalsoonida kala noqdeen qaar kamid ah wasiirada xukuumada hada ka taliso Sweden, arintaas oo keentay in ay xaaladu ku adkaato reysulwasaaraha dalkaas.
Waxaa xilka ka qaaday wasiiro:
Shir jaraa´id oo saaka lagu qabtay madaxtooyada Sweden ayaa lagu sheegay in isku shaandheyn lagu sameeyay golaha wasiirada Sweden.
Wasiirkii arrimaha gudaha Anders Ygeman ayaa xilkiisii ku wareejiyay wasiirka cadaalada ee Morgan Johansson. Halka wasiirkii kaabayaasha dhaqaale ee Anna Johansson xilkii laga xayuubiyay. Lofven ayaan dhanka kale xilka ka qaadin wasiirka difaaca Peter Hultqvist oo kamid ahaa sadexdii wasiir ee mucaaradku ay sheegeen inay kalsooniada kala noqdeen.
Reysulwasaaraha Sweden ayaa sheegay inuu qiimeeyay dhowr wado oo furnaa si uu xal uga gaaro xiisadan, isaga oo sheegay inuu doortay tii ugu fiicneyd ee uu u arkay inay ku jirto xalka dalkiisa.
Previous articleSoo jeedinta listhaug waxaa horistaagi karta maxkamada xuquuqul insaanka Yurub
Next article(Video)-Daawo: Soomaalida Germany oo mudaaharaad ka dhigay Bassel
Daawo: Boolis iyo soomaali isku gacansaari gaaray masaajidka Tawfiiq oo maanta hadana uu buuq ka dhacay.
83 qof oo shaley laga helay covid-19: Tiradii ugu badneyd tan iyo bishii April.
Keydka NorSom Velg måned august 2020 (19) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (62) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (40) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)